जहाजबाट आएकालाई सम्मान, स्थलमार्गबाट आएकालाई अपमान ! – Karnalisandesh
जहाजबाट आएकालाई सम्मान, स्थलमार्गबाट आएकालाई अपमान !
प्रकाशित मितिः २४ जेष्ठ २०७७, शनिबार ११:१७ June 6, 2020
काठमाडौँ। नेपालको संविधानले नागरिकबीच कुनै पनि आधारमा विभेद नहुने सुनिश्चित गरेको छ। अवसरबाट वञ्चित भएकालाई संविधानले ‘विशेष व्यवस्था’ हुन सक्ने गरी बाटो खुला गरेको छ। तर, सरकारले नागरिकबीच विभेदको नयाँ उदाहरण पेस गरेको छ।
मुलुकमा रोजगारीका अवसर नभएपछि श्रम बेच्न विदेशिएका लाखौं नेपालीबीच सरकारले विभेदको रेखा कोरेको हो। श्रम बेच्न छिमेकी मुलुक भारत गएका नेपाली र श्रम बेच्नकै लागि तेस्रो मुलुक गएका नेपालीबीच सरकारले विभेद गरेको हो। सरकारले विमान चढेर स्वदेश आउने श्रमिक र भारतका विभिन्न सहरबाट बस, रेल चढेर वा पैदल हिँडेर सीमा क्षेत्रसम्म आइपुगेका नेपालीबीच विभेदपूर्ण व्यवहार गरेको हो।
कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि मुलुक लकडाउनमा छ। भारत र नेपाल लगभग एकै समयदेखि लकडाउनमा छन्। लकडाउनका कारण भारतमा रोजगारीका अवसर बन्द भएपछि हजारौं नेपाली स्वदेश फर्कन थाले । यसरी सीमामा आइपुगेका नेपालीलाई ५० दिनभन्दा बढी समयसम्म सीमा नजिकका भारतीय क्वारेन्टिनमा राखियो।
रातोपाटीका अनुसार सीमा पार गर्नुअघि कोरोना संक्रमणको अनिवार्य परीक्षण गर्नुपर्ने भए पनि यस्तो परीक्षणको दायित्व सम्बन्धित व्यक्तिकै हो वा सरकारको रु प्रधानमन्त्रीले प्रष्ट उल्लेख गरेनन् । यद्यपि, परीक्षण नभई भारतबाट सीमा पार गरी आएका नेपालीहरुकै कारण तीब्र गतिमा संक्रमण फैलिएको उनले बताए ।
आखिर राज्यले आफ्ना नागरिकमाथि यस्तो विभेद किन गर्छ रु जबकि, नेपालको संविधानको धारा १८ मा समानताको हक सुनिश्चित गरिएको छ । धारा १८ को उपधारा ३ मा लेखिएको छ, ‘राज्यले नागरिकहरुका बीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन ।’